Apple na Google sonyere ihe ha nwere megide COVID-19 | Gam akporosis
Apple na Google otu megidere COVID-19
Ọnọdụ na nsogbu dị iche iche na-achịkwa mgbe ụfọdụ iji wepụta ọtụtụ mmadụ. Anyị na-ahụ ọtụtụ n’ụwa niile mmegharị nke ịdị n'otu ndị na-anwa ịme oge ndị a dị ịtụnanya na ọ bụ oge iji bie nnagide karịa. Ọchịchọ ịkwanye n'otu ụzọ ahụ anaghị aghọta asọmpi azụmahịa ọ bụla. Ihe atụ kasịnụ anyị nwere ike ịchọta bụ njikọ nke nwa oge nke ndị ọrụ ntanetị abụọ Apple na Google buso oria ojoo a agha.
Ha etinyebeghị na mkpofu nke ụmụ amaala akụkụ nke nnukwu akụ na ụba ya. Ha ezukọtala imekọ ọnụ ọnụ. Tinye nkà na ụzụ na ọrụ nke mmadụ niile, na nke a na-eke ihe di elu nsuso ijikwa na-ebuba mgbasa nke coronavirus.
Apple na Google jikọtara ọnụ megide coronavirus
Hụ nnukwu ụlọ ọrụ abụọ a na-arụ ọrụ aka ihe anyị atụghị anya ịhụ. Mana ọ bụ eziokwu na ọnọdụ anyị na-agabiga abụghị ihe anyị na-atụkwasị obi na ya. Ebum n’uche inye onyinye na inye aka Ha etinyewo esemokwu afọ iji nyere aka lụso nje a ọgụ.. Nkwekọrịta dị n'etiti ụlọ ọrụ abụọ a akara ngosi na-elekwasị anya na ịmepụta nkwado maka mmepe nke ngwaọrụ nyocha nke ndị butere ọrịa ahụ.
Echiche bụ nke ahụ site na ekwentị, site na njikọ bluetooth, nye ohere Chọpụta kọntaktị n'etiti ndị mmadụ iji chọta ọrịa nwere ike ibute. Abanyela nkwekọrịta ahụ na-aga n'ihu n'echiche na usoro dakọtara na ngwaọrụ gam akporo na iOS. N'oge ndị a ọ bụ na mmepe zuru oke. Ihe mbụ ha na-arụ ọrụ bụ mejuputa ngwa oru nke, nwaafo na sistemụ arụmọrụ, ekwe a ga-eme n'ọdịnihu App iji nweta nsuso n'enweghị.
Ebumnuche nke njikọ a dị egwu bụ ịmepụta a zuru ezu nsuso n'elu ikpo okwu. Site n'aka ya, na ya na data nke njikọ Bluetooth nyere nke ngwaọrụ niile, n'agbanyeghị sistemụ arụmọrụ ha, nwee ike ịhazi data iji tụọ ihe ndị dị mkpa. Niile, n'ezie, ya na nkwenye nke ndi oru. Ndị ụlọ ọrụ a enweghị ụkọ ikike, yabụ na olile anya na enyemaka gị ga-enyere aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Apple na Google otu megidere COVID-19
Bots dị mkpa maka Telegram: Download egwu, usoro, ihe nkiri, ngwa na ọtụtụ ndị ọzọ